2 Samoela 2 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Myama Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
2 Samoela 2:1-32
2 Taorian’izay, dia nanontany an’i Jehovah+ i Davida hoe: “Hiakatra ho any amin’ny tanàna iray any Joda ve aho?” Dia hoy i Jehovah: “Miakara.” Ary hoy i Davida: “Any aninona no hiakarako?” Dia hoy izy: “Any Hebrona.”+ 2 Koa niakatra nankany i Davida mbamin’ny vadiny roa, dia i Ahinoama+ Jezirelita sy Abigaila+ vadin’i Nabala Karmelita. 3 Ary nentin’i Davida niakatra koa ny lehilahy+ niaraka taminy, mbamin’ny ankohonan’izy ireo avy. Dia nanorim-ponenana tao amin’ireo tanàna tany amin’ny faritr’i Hebrona izy ireo. 4 Ary tonga ireo lehilahy anisan’ny fokon’i Joda,+ ka tao no nanosorany+ an’i Davida ho mpanjakan’ny taranak’i Joda.+ Ary nisy tonga nilaza tamin’i Davida hoe: “Ireo lehilahy any Jabesi-gileada no nandevina an’i Saoly.” 5 Koa nandefa iraka ho any amin’ireo lehilahy tany Jabesi-gileada+ i Davida, hilaza hoe: “Hotahin’i Jehovah anie ianareo,+ satria naneho izany hatsaram-panahy feno fitiavana+ izany tamin’i Saoly tomponareo, ka nandevina azy!+ 6 Ary haneho hatsaram-panahy feno fitiavana aminareo anie i Jehovah,+ sady hasehony aminareo koa anie fa mendri-pitokisana izy! Ary izaho koa mba hanao soa toy izany aminareo, noho ny nanaovanareo izany zavatra izany.+ 7 Koa mahereza ary aoka hahery fo ianareo,+ fa efa maty i Saoly tomponareo, ary izaho no nohosoran’ny taranak’i Joda ho mpanjakan’izy+ ireo.” 8 Ary i Abnera+ zanak’i Nera lehiben’ny tafik’i Saoly dia naka an’i Isboseta+ zanak’i Saoly, ka nitondra azy niampita nankany Mahanaima,+ 9 mba hatao mpanjakan’i Gileada+ sy ny Asorita, sy Jezirela+ sy Efraima+ ary Benjamina,+ eny, mpanjakan’ny Israely manontolo. 10 Efapolo taona i Isboseta zanak’i Saoly fony izy lasa mpanjakan’ny Israely, ary roa taona no nanjakany. Fa ny taranak’i Joda+ ihany no nomba an’i Davida. 11 Fito taona sy enim-bolana no andro nanjakan’i Davida tao Hebrona tamin’ny taranak’i Joda.+ 12 Ary nivoaka avy tao Mahanaima+ i Abnera zanak’i Nera sy ny mpanompon’i Isboseta zanak’i Saoly, ka nankany Gibeona.+ 13 Ary nankany amin’ny dobon’i Gibeona koa i Joaba+ zanak’i Zeroia+ sy ny mpanompon’i Davida, ka nihaona teo ny roa tonta. Ary samy naka toerana teo izy ireo, ka ny iray teo amin’ny andanin’ilay dobo, ary ny iray kosa teo amin’ny ankilany. 14 Farany, dia hoy i Abnera tamin’i Joaba: “Aleo hitsangana ireo zatovolahy, azafady, ka hiady eto anatrehantsika.” Dia hoy i Joaba: “Aleo àry izy ireo hitsangana.” 15 Koa nitsangana izy ireo ka nifidy roa ambin’ny folo avy tamin’i Benjamina sy Isboseta+ zanak’i Saoly, ary roa ambin’ny folo avy tamin’ny mpanompon’i Davida. 16 Ary nifampihazona tamin’ny lohany izy ireo, ka nifanindron-tsabatra teo amin’ny tehezany, dia niara-maty. Koa nantsoina hoe Helkata-hazorima io toerana io, izay any Gibeona.+ 17 Nafotaka ny ady tamin’iny andro iny, ka resy teo anoloan’ny mpanompon’i Davida i Abnera+ sy ny lehilahy israelita. 18 Tany koa izy telo mirahalahy zanak’i Zeroia:+ I Joaba+ sy Abisay+ ary Asahela.+ Ary haingam-pandeha toy ny gazela+ any an-tsaha i Asahela. 19 Dia nanenjika an’i Abnera i Asahela, ka tsy nivily niankavanana na niankavia fa nanaraka azy foana. 20 Farany, dia niherika i Abnera ka niteny hoe: “Ianao ve io, ry Asahela?” Dia hoy izy: “Izaho ity.” 21 Ary hoy i Abnera: “Mivilia miankavanana na miankavia ka misambora zatovolahy iray, dia alaivo+ ho anao izay eny aminy.” Tsy nety nivily anefa i Asahela fa nanenjika azy foana. 22 Koa hoy indray i Abnera tamin’i Asahela: “Efa hoe mivilia fa aza manaraka ahy, sao hasiako ianao ka ho faty hiampatra amin’ny tany.+ Dia hataoko ahoana no fijery an’i Joaba rahalahinao?” 23 Tsy nety nivily mihitsy anefa izy. Koa nasian’i Abnera tamin’ny vodilefona ny kibony,+ ka niboroaka teo andamosiny ny lefona. Dia lavo teo izy ka maty teo amin’izay nisy azy. Ary nijanona izay rehetra tonga teo amin’ilay toerana nahalavoan’i Asahela sy nahafatesany.+ 24 Koa nanenjika an’i Abnera i Joaba sy Abisay. Nony nilentika ny masoandro, dia tonga teo amin’ny havoanan’i Ama tandrifin’i Gia, eo amin’ny lalana mankany amin’ny tany efitr’i Gibeona, izy ireo.+ 25 Ary niangona ho antokony iray nanodidina an’i Abnera ny taranak’i Benjamina. Dia nijoro teo an-tampon-kavoana izy ireo. 26 Ary niantso an’i Joaba i Abnera ka niteny hoe: “Handrapaka+ tsy misy farany ve ny sabatra? Tsy fantatrao angaha fa fahoriana no hiafaran’izao?+ Koa rahoviana ianao vao hiteny ny olona mba hiverina ka tsy hanenjika ny rahalahiny intsony?”+ 27 Dia hoy i Joaba: “Raha mbola velona koa Andriamanitra,+ dia tsoriko fa raha tsy niteny ianao,+ dia rahampitso maraina ny olona vao ho najanona tsy hanenjika ny rahalahiny intsony.” 28 Ary notsofin’i Joaba ny anjombona,+ dia nijanona ny olona rehetra ka tsy nanenjika ny Israely intsony, ary tsy nanohy ny ady intsony koa. 29 Ary namakivaky an’i Araba+ iny alina tontolo iny i Abnera sy ny olony, ka niampita ny Reniranon’i Jordana,+ ary namakivaky an’ilay lohasaha manontolo, dia tonga tany Mahanaima+ tamin’ny farany. 30 Fa i Joaba kosa niverina ka tsy nanenjika an’i Abnera intsony. Dia novoriny ny olona rehetra. Ary sivy ambin’ny folo lahy, niampy an’i Asahela, no tsy teo intsony tamin’ny mpanompon’i Davida. 31 Enimpolo sy telonjato kosa no matin’ny mpanompon’i Davida, tamin’ny olon’i Benjamina sy ny olon’i Abnera.+ 32 Ary nentin’izy ireo i Asahela+ ka naleviny tao amin’ny fasan-drainy+ tao Betlehema.+ Ary nandeha nandritra ny alina i Joaba sy ny olony, ka tonga tany Hebrona+ rehefa nazava ny andro.
2 Samoela 2